Qoraal saxaafadeed uu soo saaray guddiga kormeerka ceeymiska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tabeellaha hayadda ceeymiska qaranka. Sawirle: TT sawir: HENRIK MONTGOMERY / TT
Qoraal saxaafadeed uu soo saaray guddiga kormeerka ceeymiska
La daabacay torsdag 7 april 2016 kl 12.30
Qoraal saxaafadeed uu maanta soo saaray guddiga kor-meerka ceeymiska bulshada ee magaciisa loo soo gaabiyo (ISF) ayuu ku sheegay inay hayadda ceemisku ku faqooqdo dadyoowga dalka dibaddiisa ka soo jeeda, kolka loo barbar-dhigo muwaadiniinta asal ahan Sweden ka soo jeeda.
Qoraalkan saxaafadeed ayaa ka dambeeyay baaritaan uu guddigu ku sameeyay habka ay hayadda ceeymisku u qiimeyo dadyoowga jirrada lagu qoro, gunnooyinka la siiyo iyada oo aan loo aabba yeeleyn nooca cudurka uu shakhsigu qabo.
Go’aannada hayadda ceeymiska qaranka ayaa sidoo kale la sheegay iney salka ku hayaan arrimmo ey ka mid yihiin heerka tacliineed ee shkahsiga, howsha uu hayo/hayso iyo dhaqaalaha soo gala. Intaa waxaa raaca in howl-wadeennada hayadda ceeymiska qaranku aaney aqoon sii fog u laheyn habka baaritaannadu u dhacaan, sida uu guddigu ku sheegay qoraal saxaafadeedkiisaasi.
─ Haydda ceeymiska qaranka ayaa loogafadhiyaa inay dardar-geliso howlaha baaritaanka ceeymiska xannuunka eedadyoowga dalkan ku dhaqan ee dibadda ka soo jeda ee jirrada ku qoran iyo sidookale baaritaannada xanuun ee ku socda dadyoowga dalka ku dhaqan ee asal ahaan kudhashay carriga bariga dhexe, waddammada dhaca waqooyiga Afrika iyo dalkaTurkiga ee diidmada ku heley dalabaadkooda, sida uu sheegay baare Martin Söder.
Isha/ Qoraal saxaafadeed